20 Ruux oo ka mid ahaa Al Shabaab oo lagu Dilay howlgallo laga sameeyay Gobolka Galgaduud – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
20 Ruux oo ka mid ahaa Al Shabaab oo lagu Dilay howlgallo laga sameeyay Gobolka Galgaduud
16th August 2015 MAREEG Af Soomaali, Featured 0
War qoraal ah oo ka soo baxay Ciidamada Midowga Afrika ee AMISOM ayaa lagu sheegay in ugu yaraan 18 Ruux oo ka mid ahaa Ururka Al Shabaab lagu Dilay howlgallo militari oo laga sameeyay Degaanada Ceel la helay iyo Ceel Garas ee Gobolka Galgaduud.
AMISOM ayaa sidoo kale xustay in Howlgalladaasi militari lagu Dilay labo Sarkaal oo ka mid ahaa Al Shabaab kuwaasi oo midi lagu sheegay in ahaa ku xigeenka Hogaamiye u qaabilsan Al Shabaab Gobolka Galgaduud halka midka kalena lagu tilmaamy in uu ahaa Sarkaal ugu magacaaban dhanka howlgallada.
Warkan kooban oo AMISOM ay ku soo baahisay bogooda Twitter-ka ayaa waxaa ay ku sheegtay in Ciidamada Dowladda Soomaaliya oo kaabaya kuwa AMISOM ay ku guuleysteen dib u soo saarida miinooyin dhowr ah oo lagu aasay hareeraha Wadooyinka.
Ugu dambeyn, Qoraalka oo ay soo saareen AMISOM ayaa lagu qeexay in Ciidamada huwanta ay guul ka soo hooyeen howlgallada militari ee dhawaan ay ku qaadeen Degaano iyo Degmooyin ka tirsan Koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya waxaana ay sheegeen Degaanada iyo Degmooyinka howlgalka lagu qaaday laga saaray Ururka Al Shabaab oo halkaasi ku sugnaa.
Xildhibaan Qoone “Wax ay reer Hiiraan raalli ka yihiin ma ahan in la celiyo Danjire Ameeriko”